Home » eBook » Free eBook: Sare Shaqaalaha Tababarka & Nafaqada Khudrada ah ee Jirka Dareer
Waxaan u soo bandhigeynaa eBARBASHO bilaash ah akhristeyaasheena! Waxaad soo dejisan kartaa Tababarada & Nafaqada Cudurka Dabeecadda ee Jidhka Dareeraha, by Mike Geary (qiimaha $ 17.99) gabi ahaanba BILAASH AH!
Buug-gacmeedkan waxaa sameeyay Mike Geary, oo ah Tababar Shakhsi oo Shahaadadaysan iyo Takhasusiye Qarsoodi ah. Buuggani waa mid aad u macquul ah oo ka badan 27 qaasatan dheef-shiid kiimikaad-xoojinta qarsoodiga ah ee aad isticmaali karto si aad uga caawiso jirkaaga jidhka dufanka jidhka. Buugani wuxuu ka kooban yahay talooyin farsamo oo kala duwan iyo istaraatiijiyado nafaqeyn si aad u daadiso dufanka jirka oo u qaado jirkaada heerka xiga. Riix Halkan ama isku xirka hoose si aad u aragto buugga ama gujinta saxda ah ee badbaadsan si aad u badbaadiso buuggaan eBook-kaaga kombiyuutarkaaga ama kaniinigaaga. Waxaad xor u tahay inaad buuggan la wadaagto asxaabtaada iyo xubnaha qoyskaaga.